Madaxa Xukuumadda Federaalka oo amray lacago deg deg loo siinayo GOBOLLADA dalka | Hadalsame Media
Home Wararka Madaxa Xukuumadda Federaalka oo amray lacago deg deg loo siinayo GOBOLLADA dalka
Madaxa Xukuumadda Federaalka oo amray lacago deg deg loo siinayo GOBOLLADA dalka
(Muqdisho) 15 Abriil 2020 – Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Feedraalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayrre, ayaa amar ku bixiyay in dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir si degdeg ah lagu gaarsiiyo lacago ay u adeegsadaan ka hortagga iyo la tacaalidda cudurka Covid-19.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayrre oo xalay guddoomiyay kulanka joogtada ah ee Guddiga Qaran ee ka Hortagga Covid-19 oo ku qabsoomay mareegta Internet-ka, ayaa wasaaradda maaliyadda ku amray fudueynta min hal Miyan oo doollar oo si degdeg ah lagu gaarsiiyo maamullada dalka.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa hoosta ka xarriiqay muhiimmadda ay midnimada iyo isu geynta cududda Soomaaliyeed ay leedahay xilligan adag ee uu dalku marayo, isaga oo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulsahda ugu baaqay in dhan looga soo wada jeesto ciribtirka cudurkaan.
Previous articleSUXUFIYOOW kala baro XADKAAGA iyo XAD-GUDUBKAAGA!
Next articleImaaraadka Carabta oo ka ”boollaystay” DF Somalia (Kartoomadii karaama qaadka)